Andro Iraisam-pirenena iadiana amin’ny SIDA : Miady amin’ny fanavakavahana maneran-tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Febroary 2020 4:06 GMT
(Fanamarihana : lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2009)
Olona an-tapitrisany maro maneran-tany no nivondrona ny Talata teo haneho fanohanana ireo miaina miaraka amin'ny VIH/SIDA. Tato anaty aterineto, tanaty bilaogy sy sehatra fiadian-kevitra, maro ireo nanombatombana ny fivoarana vita sy ny dingana mbola mila hatrehina amin'ny ady amin'ny fanavakavahana sy ny fiparitahan'ny aretina. Inty misy angon-dahatsoratra, sary ary lahatsary avy amin'ireo miteny sy manoratra amin'ny teny Frantsay.
Repoblika Demaokratikan'i Kôngô
Arkangel88 ao amin'ny Congoforums.net:
Mampalahelo ny fahitàna fa ankehitriny dia mbola toa Aretina Foronin'ny Saina entina Mampihemotra ireo Mpifankatia ihany ny fandraisan'ny olona maro ny SIDA. Mbola tsy ampy ireo fepetra raisin'ny olona manoloana io loza io.
Miresaka momba ny fanavakavahana atrehin'ny olona mitondra ny VIH ao amin'ny fireneny ny bilaogera Toniziana zizou from Djerba, manoratra avy ao Afrika Atsimo, izay vao avy nanambaran'ny governemanta paikady hanitarana ny fitsaboana ireo rehetra mitondra ny VIH :
Mbola aty Afrika Atsimo aho. Aty, iray amin'ny olona roa no voan'ny tsimokaretin'ny sida. Ao Tonizia, vitsy ny fifindrany (latsaky ny 0.01% amin'ny mponina), misy ary maimaimpoana ny fitsaboana, kanefa na eo aza izany dia mahatsapa aho fa toa mbola mijaly mafy nóho ny aty Afrika Atsimo ny olona mitondra ny VIH ao aminay. Mijaly noho ny fanilikilian'ny fianakaviany sy ny fiarahamonina azy izy ireo. Matetika dia tsy an'asa izy ireo ary tsy misy manohana na iray aza…ary noho ny inona ! Tsy gripa ny SIDA. Mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo izy io (ary mbola averiko fa tsy voatery !). Noho izany, ry namana mpiray tanindrazana, amin'izao Andro Iraisam-pirenena iadiana amin'ny SIDA izao, eritrereto ireo mijaly ary ambonin'ny zava-drehetra, eritrereto izay zavatra tsy maintsy hataontsika mba hamaranana ny fampitokana-monina sy ny fanavakavahana ireo manana io aretina io.
Manoratra momba ny Silence, horonantsary iray fanadihadiana nataon'ilay mpamokatra sarimihetsika Toniziana Karim Souaki, izay hifaninana anatinà fetiben'ny horonantsary hatao ao Marseille, France, ny Tekiano.com :
Mamaky ny “Fahanginana” momba ny SIDA izay mitambesatra eo amin'ny fiarahamonina Toniziana ity horonantsary ity, amin'ny alalan'ny tantaran'i “Jimmy”, Toniziana iray mitondrany VIH. Avoitran'io horonantsary io ny fahitàna ny sida ao amin'ny fiarahamonintsika. Mibanjina amin'ny alalan'ny mason'ilay mpamorona izay nifanena taminà olona maro miaina miaraka amin'ny VIH ianao.
Nibaribary ihany koa ny ady amin'ny fanavakavahana tao amin'ny tanànan'i Jacmel, Haiti, izay nidinan'ireo olona an-jatony tia ny mitovy fananahana aminy teny an-dalambe. OAo amin'ny PawallaPale.com :
Notarihinà mpitandrina Amerikana taloha izy ireo…izay nanangana fikambanana mifototra amin'ny fanampiana ireo olona tia ny mitovy fananahana aminy (na lahy na vavy) mba hahita ny lafin-tsaran'ny fiainana na dia mitondra ny VIH aza.
Mangataka ireo Haitiana an'arivony hanajanona ny fiatsarambelatsihiny ihany koa izy ireo. Izany hoe, hampiseho amin'izay ny maha-izy azy.
Ary farany, ao amin'ny Antilles Frantsay, fototry ny resabe sy ny ezaka fanairana ny vahoaka ihany koa ny fanavakavahana.
Manoratra ny Bebel971, bilaogin'ny kolejin'ny UNESCO, Bébel, ao Sainte-Rose, Guadeloupe :
Roapolo taona niadivana… Kanefa tsy dia nisy fivoarana. Anatin'ity Andro Iraisam-pirenena iadiana amin'ny SIDA ity, fotoana izao hanaovana jery todika. Mbola mijanona ho faritra faharoa ao Frantsa tena voakasik'io areti-mifindra io i Guadeloupe tamini'ty taona ity, miaraka aminà tahanà famindràna aretina avo efatra heny raha oharina amin'ny an'ilay tanàndehibe.
Matanjaka ny fanavakavahana ao Guadeloupe. Misy ireo fady ary tsy manao fitiliana ny olona, na dia te hanao izany aza, satria mateti-pitranga ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana avy amin'ny fianakaviana.
Raha ny mikasika ny fitiliana, namorona paikady vaovao indray ireo mpisahana ny fahasalamana : manome sosokevitra izy ireo ny mba hanatonan'ny rehetra izay maherin'ny 15 taona tobim-pahasalamana, na mety ho voa izy ireo na tsia. “Raha 70 % an'ireo izay mitondra ny VIH no voatily, dia afaka handray fepetra sy hanena ny loza mety hiseho amin'ny fahasalamany,” hoy ny Dr Marie-Thérèse Georger-Sow, filohan'ny Corevih (Fandrindràna isam-paritra ny ady amin'ny VIH).
Anatinà ezaka iadiana amin'ireo fihetsika manampy io taham-pifindrana avo dia avo io, nisy dokambarotra TV iray vaovao mandeha ao Guadeloupe sy Martinique miantso ny firaisankinan'ireo izay voan'ny VIH (amin'ny alalan'ny la discrimination dans la publicité
Ao Martinique, manoratra i madinina972bis ao amin'ny DOMActu.com :
Tsy mitombina mihitsy izany, na dia eo aza ireo antso sy fampitandremana rehetra, maro loatra ireo olona manana ity aretina ity. Miteny, miteny foana ry zareo fa tsy misy mihaino…